Maalin: Janaayo 16, 2020
Aliağa, oo gaadiid ay ku bixiyaan bas yar, dhibaatooyin ayaa ka jira gaadiidka magaalada. Rakaabku waxay ka cawdaan safarrada, socodka, iyo safarka cagaha. Maalin kasta, boqolaal shaqaale iyo shaqaale dowladeed ayaa ka socda iyaga oo ka soo guuraya xaafadaha fog fog ilaa shaqada [More ...]
Adeegga iyadoo la raacayo isku-dubbaridka Kocaeli Magaala-weynta Gaadiidka iyo Maareynta Gaadiidka, TransportationPark waxay abaabushaa 18 safar oo kaladuwan oo loogu talagalay Imtixaankii Furitaanka Kuliyadda Waxbarashada Furan (Final) Semester Final (Final) oo la qaban doono 19ka iyo 16ka Janaayo. [More ...]
Maal gashadeyaasha iibsada guryaha kirada ah ee kirada guryaha ayaa hadda ka daalay la tacaalista dhibaatooyin badan oo kireystayaasha ah. Maalgashadeyaashan, oo aan wakhti haysan, waxay xal u raadinayaan maareeyayaasha guryaha ee bixiya tiro yar oo ah adeegyada maaraynta mihnadlayaasha. [More ...]
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Kocaeli iyo Maareynta Wadooyinka ee Waaxda Gaadiidka Dadweynaha Qeybta Gaadiidka Dadweynaha ayaa sameysa cusboonaysiinta lagama maarmaanka ah ee dariiqyada iyo waqtiyada khadadka jira iyadoo la raacayo codsiyada shacabka. Macnaha guud, 510 iyo 525 [More ...]
Ogeysiiska guud ee mashruuca Üçyol - Buca Metro, oo loo yaqaan maalgashiga ugu weyn ee taariikhda Izmir, ayaa lagu daabacay websaydhka Bangiga Yurub ee Dib-u-dhiska iyo Horumarinta. Qandaraaska caalamiga ah, codsiyada dalabyada iyo sanadkaan [More ...]